China Soft PVC Pin Badges mveliso kunye nabenzi | SJJ
Izikhonkwane ze-PVC ezithambileyo zithambile, zinemibala kwaye zilula. Iilebheli zesiko le-PVC zilungile kwiimveliso zentengiso yokuthengisa, ezifumaneka ngamanqanaba amabini, uyilo lwe-3D kunye nelogo eprintiweyo ngendlela ekhethekileyo yesiko.
Iipini zebheji zihlala zisetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo njengezikolo, amaqela, unyuselo, izikhumbuzo okanye izipho. Kwimeko apho ungazithandi iibheji zentsimbi ebandayo, iibheji zepinki zeSoftware zezona zinto unokukhetha kuzo. Iibheji zepinki ze-PVC ezithambileyo zithambile kwisandla sokuziva kwaye ziqaqambile ngemibala kuneebheji zentsimbi. Uyilo oluninzi lweebheji ze-PVC ezithambileyo yimifanekiso yekhathuni, ke bayamkelwa ngabantwana nangabazali babo. Iimpawu zingenziwa ngokweziinkcukacha ezincinci njengokugcwaliswa kombala, izitikha ezishicilelweyo ezongeziweyo njalo njalo. Ubungakanani bunokuba buncinci okanye bukhulu, iimilo zinokwenziwa ngokwesicelo sakho.
Iibheji zepinki ze-PVC ezincinci zitshiphu kwaye zilungele unyuselo. Iseti epheleleyo yeebheji zepinki ze-PVC ezinabalinganiswa ezahlukeneyo ziyathandwa kulutsha kulungiselelo okanye ekwakheni iqela. Iibheji zethu zepinki ye-PVC ethambileyo zezendalo, zinokudlula zonke iintlobo zeemfuno zovavanyo. Iya kuhlangabezana neemfuno zakho kungekuphela kwamaxabiso kodwa nomgangatho. Ubungakanani obahlukeneyo beodolo bamkelekile, kwaye iiodolo ezinkulu ziya kufumana amaxabiso angcono.
Imveliso yethu yePin yeebheji ye-PVC inokugqitywa ngexesha elifutshane ngomgangatho ophezulu. Usuku olu-1 lomsebenzi wobugcisa, iintsuku ezi-5 ~ 7 zeesampulu, iintsuku ezili-12 ~ 15 zokuvelisa. Oku kuyokunceda ngakumbi kulwandiso lwebrand. Ubunzima bokukhanya bukwanceda ukuba ugcine iindleko zokuhambisa. Eyona nkonzo ibalaseleyo iya kubonelelwa kwangoko xa sifumana imibuzo yakho.
Izixhobo: I-PVC ethambileyo
Motifs: Die Struck, 2D okanye 3D, icala elinye okanye macala kabini
Imibala: Imibala inokutshatisa umbala wePMS
Ukugqiba: Zonke iintlobo zeemilo zamkelekile, iiLogo zingaprintwa, zibhalwe, i-Laser ikrolwe kwaye ke akukho
Ukhetho oluQhotyoshelweyo oluqhelekileyo: Isinyithi okanye i-PVC ibhotolo yokubhabha, izikhonkwane zokhuseleko, iimagnethi, isikrufu kunye neenutshi, kunye nesicelo sakho ngasinye
Ukupakisha: 1pc / ibhegi poly, okanye ngokutsho isicelo sakho
Akukho sithintelo se-MOQ
Egqithileyo Ukutsalwa kweZipper ethambileyo
Okulandelayo: Iilebhile zePVC ezithambileyo
Iipini zeSiko lesiqhelo
ipini yeplastiki yelaphu
ibheji ethambileyo ye-pvc
i-pin ethambileyo ye-pvc
Izikhonkwane ze-PVC ezithambileyo